5 sonnets site n'aka Federico García Lorca iji mee emume ncheta ọmụmụ ya. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
5 sonnets site n'aka Federico García Lorca iji mee emume ncheta ọmụmụ ya.
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Abụọ
5 maka June nke 1898. kasị agụ uri Spanish n'oge niile, Federico Garcia Lorca. Maka onye nwere ọgụgụ isi karịa amaokwu, akwụkwọ akụkọ na akụkọ karịa uri, agbanyeghị, enwere m mmasị na Lorca. Mma, ike, ihe kacha mkpa, mmetụta na ike nke okwu ya ha ruru ogo nke uri kachasi nma n'asusu Spanish. Otu afọ ọzọ, ana m eme ncheta ọmụmụ ya, oge a 5 nke sonnets ya.
Edere ihe niile banyere Federico García Lorca. Na-enweghị isi na okwu ọbụla ma ọ bụ ncheta maka ndụ na ọrụ ya ya mere ọtụtụ ndị ọkachamara gụrụ ya. Naanị m na-ede edemede edemede ebe a ebe m na-ekerịta ma ọ bụ nwee mmasị na ihe m gụrụ ma ọ bụ mara. Ma enwere ndị dere ya n'elu nyocha ọ bụla ka onu ogugu gi. Lorca bụ otu n'ime ha, otu n'ime ha dị mkpa ka enwe mmetụta kama ịgụ. Ya mere, ka anyị ghara igbu oge ụtọ nke ịgụ ya ọzọ.
1 5 sonnet
1.1 Sonnet Gongorian
1.2 Sohụnanya ọnya
1.3 Abalị nke ụra na-ehi ụra
1.4 Sonnet nke Comptọ Mkpesa
1.5 Achọrọ m ịkwa ákwá iru uju m ma m gwa gị ...
Ndị a bụ ndị ise ahọpụtara iji kpalite ncheta ya: Sonnet Gongorian, Sohụnanya ọnya, Abalị nke ụra na-ehi ụra, Sonnet nke Comptọ Mkpesa y Achọrọ m ịkwa ákwá iru uju m na-agwa gị...
Nduru a sitere na Turia nke m na-ezitere gị,
na-atọ ụtọ n'anya na-acha ọcha feathers,
na laurel nke Greece wunye ma gbakwunye
ngwa ngwa ire ọkụ mgbe m na-akwụsị.
Omume ọma ya, olu ya dị nro,
na slime okpukpu abụọ nke ụfụfụ ọkụ,
nke nwere ntu oyi, pearl na alụlụ
enweghị ọnụ gị na-akanye.
Gbaa aka gị n'elu ọcha ya
i gha hu ihe igwe egwu snowy
gbasaa flakes na ịma mma gị.
Ya mere, obi m abalị na ehihie
onye nọ n'ụlọ mkpọrọ nke ịhụnanya gbara ọchịchịrị,
ọ na-ebe akwa n’enweghị nhụjuanya ọ hụrụ.
Nke a bụ ọkụ, ọkụ a na-eripịa ihe.
Ọnọdụ a na-acha ntụ ntụ gbara m gburugburu.
Ihe mgbu a maka naanị otu echiche.
Nhụjuanya a nke eluigwe, ụwa na oge.
Ibe ákwá nke ọbara a na-achọ mma
lyre na-enweghị a usu now, mmanu tii.
Oke ibu nke oke osimiri ahu dakwasiri m.
Ejula a na-ebi n’obi m.
Ha bu okpu-eze nke ihunanya, ihe-ndina ndi emeruru aru,
ebe na-ehi ụra, M na-arọ nrọ ọnụnọ gị
N’etiti mkpọmkpọ ebe nke igbe m dara ada.
Ma ọ bụ ezie na m na-achọ ọnụ ọgụgụ isi
obi gi na enye m ndagwurugwu
na hemlock na ahuhu nke ilu sayensị.
Abalị nke ụra na-ehi ụra
Abalị na ọnwa zuru ezu,
Amalitere m ibe ákwá, ị chịkwara ọchị.
Nleda gị bụ chi, mkpesa m
oge na kpalakwukwu na agbụ.
N'abalị ala abụọ. Crystal nke iru uju,
ị kwara ákwá maka ebe dị omimi.
Ihe mgbu m bụ otu ìgwè nke nhụjuanya
n’elu obi gị nke adịghị ike.
Chi ọbụbọ ọnụ anyị n’elu akwa,
ọnụ ha n'ụgbọelu oké mmiri ozuzo
nke ọbara na-adịghị agwụ agwụ nke na-awụfu.
Anyanwụ wee bata na mbara ihu mechiri emechi
na coral nke ndụ meghere alaka ya
karịrị obi m ekpuchiri ekpuchi.
Sonnet nke Comptọ Mkpesa
Afraidjọ na-atụ m ịhapụ ịtụnanya
anya-gi abua, na uda olu
na n'abalị na-etinye m na agba
owu nke ume gi.
Ọ dị m nwute n’ịnọ n’ikpere mmiri a
akpati enweghị alaka; na ihe m kacha eche
enweghị ifuru, pulp ma ọ bụ ụrọ,
maka ikpuru nke ahụhụ m.
Ọ bụrụ na ị bụ akụ m zoro ezo,
ọ bụrụ na ị bụ obe m na mmiri mgbu m,
ọ bụrụ na abụ m nkịta nke ịbụisi gị,
ekwela ka m tufuo ihe m ritere
ma mee ka osimiri Naịl gị dị mma
na epupụta nke oge m ewezugara.
Achọrọ m ịkwa ákwá iru uju m ma m gwa gị ...
Achọrọ m ịkwa ákwá iru uju m na-agwa gị
nke mere na ị hụrụ m n'anya wee kwaara m ákwá
N'abalị nke ahịhịa abalị,
eji mma-agha, isutu-ọnu na iyere gi.
Achọrọ m igbu naanị onye àmà
n'ihi igbu ohia m
ma gbanye anya mmiri m na ọsụsọ m
n’okpo ebighi-ebi nke ọka wit siri ike.
Ka skein ghara ịkwụsị
Ahụrụ m gị n'anya, ị hụrụ m n'anya, ọkụ mgbe niile
ya na anyanwụ na-acha ọnwa na ọnwa ochie.
Ihe ị na-enyeghị m ma ghara ịrịọ maka ya
Ọ ga-abụ maka ọnwụ, nke na-adịghị ahapụ
ma ọ bụ onyinyo maka anụ ahụ na-ama jijiji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Abụọ » 5 sonnets site n'aka Federico García Lorca iji mee emume ncheta ọmụmụ ya.
Ebumnuche magburu onwe ya… Ọ ga-enye aka ma ọ bụrụ na ha na ndị odeakwụkwọ na-eme ya.
Họrọ poems ma gosi ha, iji mara ha ma ọ bụrụ na ọ kwesịrị ekwesị ịzụta akwụkwọ ha.
Jiri obi ekele.
Zaghachi na Narcís
nche hugo dijo
Ọ na-akasi mbipụta nke uri na narị afọ a nke na-emebi ihe niile, ọkachasị sonnets, n'uche nke m abụ abụ kacha mma. Ọ dị mma na obere akụkụ a nke ụwa agụghị akwụkwọ efu. Mgbe ụfọdụ, ebe nchekwa abụghị ikpe maka njehie ndị a, mana ọnwụ nke ọmarịcha, nke na-akwa ụta karịa.
Zaghachi hugo nche
Akwụkwọ kacha mma nke Chimamanda Ngozi Adichie